🥇 Ukwenza ingxelo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 36
Ukwenza ingxelo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo
Ividiyo yobalo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo
Uku-odolwa kwengxelo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo
Ukuba ufuna ukwandisa umgangatho wobalo-mali kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo, khuphela kwaye ufake izisombululo ezintsonkothileyo kwiqela le-USU lesoftware. Isoftware ye-USU ikulungele ukubonelela ngesoftware ekumgangatho ophezulu kwaye kwangaxeshanye ixabisa ixabiso elifanelekileyo. Ukongeza, uluhlu lweenkonzo zethu xa uthenga ilayisensi yesoftware yobalo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo ikwabandakanya ikhosi yoqeqesho emfutshane kunye noncedo ekwenzeni imveliso oyithengileyo. Ezi ziimeko ezintle kakhulu ezihamba nazo, oko kuthetha ukuba kufanelekile ukwenza ukhetho uxhasa ubalo-mali lwethu kunye nohlalutyo lwesoftware yemveliso yokufuya.
Ukwenza ingxelo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo yenziwa ngokungagungqiyo ukuba unxibelelana neqela lethu labaprogram. Siza kukubonelela ngenkqubo yohlalutyo eqokelela kunye neenkqubo zolwazi malunga nemveliso yemfuyo, kunye nokubalwa kwayo, emva koko, olu lwazi luya kufumaneka kubasebenzi abanamalungelo afanelekileyo okufikelela kwinkqubo.
Kwisoftware yethu yobalo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo, kukho ukhetho lokwahlulahlula imisebenzi ngokwenqanaba lokwamkelwa. Umzekelo, ukuba ingcali yesiqhelo iqhuba isenzo sayo kwinkqubo, iya kuba nakho ukusebenza kuphela ngeseti encinci yolwazi abanokufikelela kuyo. Olu seto lolwazi lilinganiselwe kuludwe lweedatha apho umntu onikiweyo kufuneka asebenzisane naye ngexesha lenkqubo yokuvelisa. Amanyathelo obalo lwemfuyo anje akuvumela ukuba ube yinkokheli kwintengiso ngokukhawuleza, ube ngusomashishini ophumelele kakhulu.
Uyakwazi ukuhlala ngokuqinileyo kwezona ndawo zentengiso zamkelekileyo, ushenxise bonke abakhuphisana nabo kwaye uvelise amanqanaba aphezulu enzuzo kwixesha elide. Kwicandelo lobalo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo, inkampani yakho kufanele ukuba ikhokele ngenxa yokuba inqanaba lokwazisa kwabantu abanoxanduva liya kuba lelona liphezulu. Ke ngoko, izigqibo zolawulo kufuneka zenziwe kwinqanaba elifanelekileyo lomgangatho. Ukongeza, ukusetyenziswa kobuxhakaxhaka bethu kwenza ukuba kube lula ukufunda iingxelo ezahlukeneyo.
Isoftware ivelisa iingxelo zekota okanye amanye amaxwebhu. Kuya kufuneka uziqhelanise nolwazi olunikezelweyo ukuze ufumane izigqibo ezifanelekileyo. Ukuba ubandakanyeka kubalo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo, ngekhe wenze ngaphandle kobunzima. Le software ifezekisa eyona migaqo ingqongqo esemgangathweni. Ukongeza, sihlawulisa ixabiso elifanelekileyo kwisakhiwo esiyilwe kakuhle.
Uyakwazi ukuxhaphaza iigrafu eziphambili kunye neetshathi zohlobo lwamva nje. Ukusetyenziswa kwabo kukuvumela ukuba ufunde ngokukhawuleza ulwazi olunikezelweyo lwendalo yangoku. Kwiitshathi, unokukhubaza amasebe ngamanye, kwaye kwiitshathi, unokuzicima iziqendu. Amanyathelo anjalo akuvumela ukuba ufunde ingxelo ekhoyo ngeyona ndlela ineenkcukacha. Imveliso yemfuyo kufuneka ibe phantsi kolawulo oluthembekileyo, kwaye uya kuba nakho ukunika ukubaluleka kokuzaliswa kwemfuyo.
Ukuba ubandakanyeka kwimveliso yobisi, ubunzima be-accounting kunye nohlalutyo iya kuba sesona sixhobo silungileyo. Enkosi kwiphephancwadi elidijithali eliphambili elivela kwi-USU Software, uya kuba nakho ukuthumela iingxelo kumazwe angaphandle. Lo msebenzi ungenziwa kusetyenziswa ithuba lokusebenzisa iinkonzo zefu. Ulwazi oluyimfuneko luya kugcinwa kwimidiya ekude, okuthetha ukuba ayizukuthatha indawo eninzi kwi-hard disk yekhompyuter yakho
Sihlawula ngokubaluleka kwimveliso yokufuya izilwanyana, ke ngoko, senze indawo ekhethekileyo yohlalutyo lweenkqubo zemveliso. Ukuba ukwishishini lokuvelisa, ubalo-mali kufuneka lwenziwe ngokungenamakhwiniba. Faka imveliso yethu entsonkothileyo kwiikhompyuter zakho kwaye ungabinamava kulawulo lomsebenzi weofisi. Uyakwazi ukusebenzisana nomsebenzisi weprinta. Ngoncedo lwale mini-nkqubo, kuyakwenzeka ukuba uprinte uluhlu lwamaxwebhu afanelekileyo kunye nemifanekiso. Nokuba usebenza neemephu zehlabathi, unokuziprinta, ugcine zonke iindawo eziphawuliweyo kunye nezinye izinto kumfanekiso.
Kwimveliso, uya kuba ukhokele, kwaye uya kubandakanyeka kubalo lwemveliso yezilwanyana ngokufanelekileyo. Imveliso inokulawulwa ngokufanelekileyo, kwaye uhlalutyo lwazo zonke iinkqubo ezenzeka ngaphakathi kwiqumrhu ziya kwenziwa ngokugqibeleleyo. Ukulungiselela ezi njongo, kufuneka usebenzise iinkonzo ze-USU Software, indawo yethu igqitha kakhulu zonke ii-analogs ezaziwayo ngokwexabiso kunye nomgangatho.
Ngokuthenga isoftware, ufumana inkqubo ekumgangatho ophezulu ekunceda ukuba uhambe ngokukhawuleza kulo naluphi na uhlobo lomsebenzi weofisi. Yenza ubalo lwayo kunye nohlalutyo lwazo zonke iinkqubo ezenzeka ngaphakathi kwishishini usebenzisa izixhobo ezenzekelayo. Ngokusebenzisa isisombululo sethu esipheleleyo, uya kuba nakho ukurekhoda kwaye uhlalutye ulawulo lwemveliso ngaphandle kobunzima. Lonke uluhlu lwezixhobo zolwazi luya kuwela ezandleni zabo kanye abo bantu banegunya elifanelekileyo lokuyiqhuba. Uya kuba nesixhobo sokuhlaziya imfuyo esomeleleyo ukuze ufunde iingxelo ezineenkcukacha. Ngapha koko, le software ineyona teknoloji iphambili yokwakha eyona ngxelo ifanelekileyo. Enkosi ngenkqubo yethu ephambili yobalo kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo, inkampani yakho kufuneka ikwazi ukukhokela kwintengiso. Kuya kubakho ithuba lokulwa ngokulinganayo nabaphikisi.
Ngenxa yokufumaneka kolwazi oluhlaziyiweyo kunye nokwabiwa ngokufanelekileyo kwezixhobo, uya kuba nakho ukwakha umgaqo-nkqubo wezoshishino ochanekileyo.
Ukufakwa kobuxhakaxhaka bobuchwephesha kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo yinkqubo eyenziwayo ngoncedo lweengcali zeUSU Software. Xa uthenga ilayisenisi yolu hlobo lwesoftware, unokuthembela kuncedo olunzulu lobuchwephesha kwiqela le-USU Software.
Asizukubonelela ngekhosi yoqeqesho emfutshane kuphela kodwa siya kukunceda ufake inkqubo yobalo lwemfuyo kunye nenkqubo yohlalutyo kwiikhompyuter zakho.
Ngoncedo lwamalungu eqela lethu, ukucwangciswa okufunekayo kuyasetwa, kunye neeparameter zokuqala ezifakwe kwimemori yePC. Uyakwazi ukujongana nokwenza ingxelo kunye nohlalutyo lwemveliso ngaphandle kobunzima kuba ubukrelekrele bokuzenzela buya kwenza uncedo olufunekayo. Sebenza neemephu zehlabathi ukuze ulandele iiodolo ezahlukeneyo. Kuya kuba nakho ukuphawula inqanaba labo kwaye basebenze ngezi zikhombisi zolwazi. Unokuzikhuphelela kwinguqulelo yasimahla yolawulo lwemfuyo, eyilelwe ngokukodwa ukubalwa kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo. Ushicilelo lwedemo lubonelelwe simahla, kodwa alujoliswanga nangayiphi na indlela kusetyenziso lwentengiso.
Unokuzimela kwaye uziqhelanise ngokupheleleyo nomxholo kunye nokusebenza komxholo wale software. Ukwenza isigqibo solawulo malunga nokuba uyayifuna na le software okanye ungavumi ukuyithenga iya kuba sezandleni zakho ngokupheleleyo. Ukuba uthatha isigqibo sokufaka ingxelo enelayisensi yesicelo esiphambili sobalo-mali kunye nohlalutyo lwemveliso yemfuyo, ungasebenza ngokudibeneyo nesiseko sabathengi. Uya kuba nethuba elihle lokusoloko uphendula imibuzo yabathengi bakho kwaye usebenze ngezikhalazo ngokudibanisa nolwazi olugcinwe kwi-hard drive yekhompyuter yakho.
Ukwenza ingxelo ngeendleko kunye nokuveliswa kwemveliso yemfuyo
Ukwenza ingxelo ngezityalo kunye nemveliso yemfuyo
Ukwenza ingxelo ngemveliso yemfuyo egqityiweyo
ingxelo yokugcina izilwanyana
Ukwenza ingxelo ngeendleko zemveliso yeemveliso zobisi
Ukwenza ingxelo ngemveliso yemfuyo
ukuphendula ngokufuya iihagu
Ukuphendula ngokufuya iigusha
ilog yokuphendula ngobisi
uphendlo lwezilwanyana zokutyebisa
Ukwenza ingxelo ngezilwanyana ngokukhula nokutyeba
uphatho mali lwesabelo
ubalo lweendleko kwimfuyo
upicotho lweendleko kwimveliso yezilwanyana
uphendlo lweemveliso zeenkukhu
uphendlo lwemveliso yemfuyo
uphendlo lweemveliso zokufama zobisi
uphendlo lweemveliso zemfuyo
accounting kwifama yeenkukhu
imveliso accounting kwimfuyo
Inkqubo yobalo lweenkukhu
Uhlalutyo lwexabiso lemveliso yemfuyo
Uhlalutyo lwemveliso kunye neendleko zeemveliso zemfuyo
Uhlalutyo lweemveliso zemfuyo
Uhlalutyo lwexabiso lobisi
Uhlalutyo lwexabiso lexabiso kwimfuyo
Uhlalutyo lobalo lwemfuyo
Uhlalutyo lobalo lwemveliso yemfuyo
Ubalo lwezilwanyana efama
ukufunyanwa okuzenzekelayo kwemfuyo
Inkqubo yophuhliso lweefama
incwadi yencwadi yokugcina ingxelo
ingxelo yezolimo yasefama
ulawulo lwemveliso yemfuyo
iphepha lokugcina ingxelo lokutya
iphepha lokurekhoda lokutya
iphepha lokurekhoda lolawulo lomxhesho
Inkqubo yokuphuhlisa iinkomo
Iinkqubo zeenkomo zeenkomo
Ukubalwa kwexabiso lobisi
Iziko leenkqubo zolwazi kwimfuyo
Ulawulo lokugcina izilwanyana
Ukulawulwa kwefama yeenkukhu
Iindleko zokubala ngemveliso yemfuyo
Iindleko zokuphendula ngokufuya ubisi
Iindleko zokubala ngokufuya iinkukhu
Iindleko zobalo lwemveliso yemfuyo
Inkqubo yophuhliso lwezolimo zobisi
Ulawulo lweefama zobisi
Khuphela usetyenziso kwifama
Khuphela mahala kwinkqubo yefama
Khuphela inkqubo yefama
Khuphela inkqubo yobalo lwemivundla
Incwadi ye-elektroniki yokuphendula ngezilwanyana kunye neentaka
Isoftware yobalo lwefama
Ukusetyenziswa kwemali yokutya
Isixhobo sokusebenzisa ukutya
Ukuzalisa ingxelo yolawulo lokutya
Isoftware yolawulo lomhlambi
Iinkqubo zolawulo lomhlambi
Inkqubo yolwazi kwimfuyo
Inkqubo yophuhliso lwemfuyo
Ukufuya okuzenzekelayo kwemfuyo
Inani eliphambili lomhlambi
Ulawulo lwefama yabalimi
Ulawulo lweefama zeenkukhu
Oomatshini noomatshini abazisebenzelayo
Inkqubo ye-intanethi yeentaka ezinkulu
Ubhaliso lomnombo kwimfuyo
Ulawulo lomgangatho weenkukhu
Ubalo-mali oluphambili lweemveliso zemfuyo
Ulawulo lwemveliso yobisi
Ukuveliswa kwemveliso yemfuyo
Inkqubo yomfama oqalayo
Inkqubo yefama yabalimi
Inkqubo yabalimi bemfuyo
Inkqubo yobalo lweehagu
Inkqubo yefama yeenkukhu
Inkqubo yokufuya iigusha
Ulawulo lomgangatho wenyama yenkukhu
Ubhaliso lokufuya iinkukhu
Ukuqhuba ifama yabalimi
Inkqubo encinci etyiwayo
Iinkqubo zokwenza izilwanyana
Iinkqubo zokugcina izilwanyana
Inkqubo yobalo lweegusha
Ubalo lwabantu basemanzini
Inkqubo yokusebenza kwezilwanyana
Ubalo-mali lweZootechnical kwimfuyo yezilwanyana